Boosaaso:-Kulan kormeer ah oo Gudiga Amniga iyo Nabadgalyada Baarlamanka DPL ayay kula kulmeen madaxda sare ee Wasaaradda Amniga iyo DDR ee DPL Ayaa ka dhacay Xarunta dhexe ee Wasaaradda Amniga iyo DDR-ta Dawladda Puntland.
Wasiirka Wasaaradda Amniga iyo DDR Hon. Cabdisamad Maxamed Gallan, Wasiir ku Xigeenka iyo Agaasimaha Guud oo ay wehliyaan lataliyaayasha Wasaaradda ayaa warbixin faahfaahsan ka siiyay gudiga habsami u socodka shaqooyinka Wasaaradda iyo isbdalada ay samaysay Wasaaraddu labadii sano ee ugu danbaysay.
Dhinac kale Wasiirka Wasaaradda Amniga iyo DDR-ta Dawladda Puntland. Mudane Cabdisamed Gallan ”Ma aqbali karno wixii dhiigeenu ku baxay oo wakhtigeenu ku baxay, in shakhsiyaad magaca soomaaliyeed wata oo waliba wakhtigoodii dhamaaday inay mar labaad kala irdheeyaan dadka soomaaliyeed”.